Tumi a Wɔde Siesie Ade​—Yehowa ‘Reyɛ Ade Nyinaa Foforo’ | Bɛn Yehowa
Tumi a Wɔde Siesie Ade​—Yehowa ‘Reyɛ Ade Nyinaa Foforo’
1, 2. Nneɛma bɛn na adesamma abusua ahwere nnɛ, na ɔkwan bɛn so na eyinom ka yɛn?
ABOFRA bi yera anaasɛ obubu agode bi a n’ani gye ho na osu yayaayaw. Ne su no yɛ awerɛhow! Nanso, woahu sɛnea abofra anim tew bere a ɔwofo bi san ma ne nsa ka ade a ɔhweree no pɛn? Ɔwofo fam no, ebia na asɛm no ara ne sɛ ɔbɛhwehwɛ agode no anaasɛ ɔbɛhyehyɛ ama no. Nanso, abofra no ani gye yiye na ɛyɛ no nwonwa kɛse. Ne nsa asan aka ade a na osusuw sɛ afi ne nsa koraa no!
2 Yehowa, Agya a ɔsen biara no, wɔ tumi sɛ ɔbɛma n’asase so mma nsa aka ade a wosusuwii sɛ afi wɔn nsa koraa no bio. Nokwarem, ɛnyɛ agode kɛkɛ ho asɛm na yɛreka. Wɔ “mmere a emu yɛ den” yi mu no, yebetumi ahwere nneɛma a ɛsom bo koraa. (2 Timoteo 3:1-5) Ɛte sɛ nea nneɛma a nnipa ani gye ho kɛse—afie, agyapade, adwuma, ne akwahosan mpo—da asiane mu bere nyinaa. Sɛ yesusuw nneɛma a atwa yɛn ho ahyia a wɔresɛe no ne nea ama yɛrehwere te sɛ abɔde a nkwa wom pii a ase retɔre no ho nso a, yɛn ho betumi adwiriw yɛn. Nanso, biribiara nni hɔ a ɛka yɛn kɛse sen yɛn dɔfo bi wu. Sɛnea yɛte nka sɛ yɛahwere ade ne bubu a ebubu yɛn no betumi abunkam yɛn so yiye.—2 Samuel 18:33.
3. Anidaso a awerɛkyekye wom bɛn na wɔaka ho asɛm wɔ Asomafo no Nnwuma 3:21, na ɔkwan bɛn na Yehowa bɛfa so ama abam?
3 Ɛnde, hwɛ awerɛkyekye a ɛyɛ sɛ yebesua Yehowa tumi a wɔde siesie ade ho ade! Sɛnea yebehu no, nneɛma a Onyankopɔn betumi asiesie na ɔbɛyɛ ama n’asase so mma no yɛ nwonwa yiye. Nokwarem no, Bible da no adi sɛ Yehowa abɔ ne tirim sɛ ‘ɔbɛhyɛ nneɛma nyinaa ananmu.’ (Asomafo no Nnwuma 3:21) Yehowa de Mesia Ahenni a ne Ba, Yesu Kristo, di so no na ɛbɛyɛ eyi. Adanse a ɛwɔ hɔ no da no adi sɛ Ahenni yi fii ase dii tumi wɔ soro afe 1914 mu. * (Mateo 24:3-14) Dɛn na wɔbɛhyɛ ananmu? Ma yensusuw nneɛma akɛse a Yehowa bɛsan asiesie no bi ho nhwɛ. Yetumi hu eyi mu biako na yenya mu kyɛfa dedaw. Afoforo bɛbam kɛse daakye.
Nokware Som a Wɔasan De Asi Hɔ
4, 5. Dɛn na ɛbaa Onyankopɔn nkurɔfo so wɔ afe 607 A.Y.B. mu, na anidaso bɛn na Yehowa ma wonyae?
4 Ade biako a Yehowa asan de asi hɔ dedaw ne nokware som. Nea ɛbɛyɛ na yɛate ase no, ma yɛnhwehwɛ Yuda ahemman no abakɔsɛm mu kakra. Saa a yɛbɛyɛ no bɛma yɛanya sɛnea Yehowa de ne tumi a wɔde siesie ade no yɛ adwuma no mu nhumu a ɛyɛ anigye.—Romafo 15:4.
5 Wo de susuw sɛnea Yudafo anokwafo tee nka wɔ afe 607 A.Y.B. bere a wɔsɛee Yerusalem no ho hwɛ. Wɔsɛee wɔn kurow a wɔn ani gye ho no dwiriw n’afasu gui. Nea enye koraa no, wogyaw asɔrefie fɛfɛ a na Salomo asi no, beae koro pɛ a na wɔsom Yehowa nokwarem wɔ asase nyinaa so no agowagow. (Dwom 79:1) Wɔfaa wɔn a wɔankunkum wɔn no nnommum kɔɔ Babilon, na wogyaw wɔn kurow no amamfõ a wuram mmoa na na wɔnenam hɔ. (Yeremia 9:11) Wɔ nnipa ani so de na ɛte sɛ nea anidaso biara nni hɔ bio. (Dwom 137:1) Nanso, Yehowa a na ofi bere tenten aka ɔsɛe yi ho asɛm asie no ma wonyaa anidaso sɛ bere bi bɛba a wɔbɛkyekye bio.
6-8. (a) Asɛmti bɛn na epuee mpɛn pii wɔ Hebri adiyifo no nhoma mu, na ɔkwan bɛn so na nkɔmhyɛ ahorow a ɛte saa no nyaa ne mmamu a edi kan? (b) Wɔ ɛnnɛ mmere yi mu no, ɔkwan bɛn so na Onyankopɔn nkurɔfo ahu nneɛma pii a wɔbɛsan asiesie ho nkɔmhyɛ ahorow no mmamu?
6 Nokwarem no, na nneɛma a wɔbɛsan asiesie no yɛ asɛmti a epuee mpɛn pii wɔ Hebri adiyifo no nhoma mu. * Yehowa nam wɔn so hyɛɛ asase bi a wɔbɛsan asiesie so ama nnipa atra so, a ɛbɛdan asasebere, na wɔabɔ ho ban afi mmoa bɔne ne atamfo ntua ho no ho bɔ. Ɔkaa wɔn asase a wɔbɛsan asiesie so no ho asɛm sɛ paradise ankasa! (Yesaia 65:25; Hesekiel 34:25; 36:35) Nea ɛsen ne nyinaa no, na wɔbɛsan de nokware som asi hɔ, na wɔasi asɔrefie no bio. (Mika 4:1-5) Saa nkɔmhyɛ ahorow yi maa Yudafo a na wɔwɔ nnommumfa mu no nyaa anidaso, na ɛboaa wɔn ma wogyinaa mfirihyia 70 nnommumfa mu a wɔkɔe wɔ Babilon no ano.
7 Awiei koraa no, bere dui sɛ wɔbɛsan aba wɔn asase so. Bere a Yudafo no nyaa ahofadi fii Babilon nsam no, wɔsan baa Yerusalem besii Yehowa asɔrefie wɔ hɔ. (Esra 1:1, 2) Bere tenten a wɔbataa nokware som ho no, Yehowa hyiraa wɔn ma wɔn asase maa nnɔbae, na wodii yiye. Ɔbɔɔ wɔn ho ban fii wɔn atamfo ne mmoa bɔne a na wɔatra wɔn asase no so mfe pii no ho. Hwɛ sɛnea ɛbɛyɛ sɛ wɔn ani gyee Yehowa tumi a wɔde siesie ade no ho! Nanso, na saa nneɛma a wɔbɛsan asiesie ho nkɔmhyɛ mmamu no yɛ mfiase ara kwa. Na ne mmamu kɛse bɛba wɔ “nna a edi akyiri no mu,” yɛn bere yi so, bere a wɔde Ɔhene Dawid Dedifo a wɔahyɛ ne ho bɔ bere tenteenten no besi ahengua so no.—Yesaia 2:2-4; 9:6, 7.
8 Bere a wɔde Yesu sii ahengua so wɔ ɔsoro Ahenni mu wɔ afe 1914 mu no, ɔde n’adwene sii Onyankopɔn nkurɔfo anokwafo a wɔwɔ asase so no honhom fam ahiade ho dwumadi so. Sɛnea Persia nkonimdifo Kores yii Yudafo nkaefo no fii nnommumfa mu wɔ Babilon wɔ afe 537 A.Y.B. mu no, Yesu yii honhom fam Yudafo nkaefo—n’ankasa akyidifo—fii nnɛyi Babilon, wiase atoro som ahemman no nkɛntɛnso ase. (Romafo 2:29; Adiyisɛm 18:1-5) Efi afe 1919 reba no, wɔasan de nokware som asi ne sibea a ɛfata wɔ nokware Kristofo asetra mu. (Malaki 3:1-5) Efi saa bere no, Yehowa nkurɔfo asom no wɔ ne honhom fam asɔrefie a watew ho—Onyankopɔn nhyehyɛe ma nokware som mu. Dɛn nti na eyi ho hia yɛn nnɛ?
Honhom Fam Nsiesie—Nea Enti a Ɛho Hia
9. Asomafo no akyi no, dɛn na Kristoman mu asɔreasɔre no yɛe wɔ Onyankopɔn som ho, nanso dɛn na Yehowa ayɛ wɔ yɛn bere yi so?
9 Susuw abakɔsɛm yi ho hwɛ. Kristofo a wɔtraa ase wɔ afeha a edi kan mu no nyaa honhom fam nhyira pii. Nanso Yesu ne asomafo no ka siei sɛ wɔbɛsɛe nokware som na wɔama ayera. (Mateo 13:24-30; Asomafo no Nnwuma 20:29, 30) Asomafo no akyi no, Kristoman sɔree. N’asɔfo faa abosonsomfo nkyerɛkyerɛ ne nneyɛe dii akyi. Ɛkame ayɛ sɛ wɔmaa Onyankopɔn a wɔkaa ne ho asɛm sɛ ɔyɛ Baasakoro a wontumi nte ase no anim kɔ yɛɛ nea ɛnyɛ yiye nso, na wɔkyerɛkyerɛɛ nkurɔfo sɛ wɔnka wɔn bɔne nkyerɛ asɔfo na wɔmmɔ Maria ne “ahotefo” mpae mmom sen sɛ wɔbɛbɔ Yehowa mpae. Afei, mfehaha pii a wɔman fii nokware no ho saa akyi no, dɛn na Yehowa ayɛ? Wɔ ɛnnɛ wiase mu—wiase a nyamesom mu atosɛm ne nneyɛe bɔne ahyɛ mu ma mu—no, ɔde ne ho agye nsɛm mu ma ɔde nokware som asi hɔ bio! Bere a ɛnyɛ sɛ yɛreka agugu mu no, yebetumi aka sɛ nsiesie yi yɛ nneɛma a akɔ so nnɛ bere yi mu a ɛho hia sen biara no mu biako.
10, 11. (a) Nneɛma abien bɛn na ɛwɔ honhom fam paradise mu, na ɔkwan bɛn so na ɛka wo? (b) Nnipa bɛn na Yehowa aboaboa wɔn ano akɔ honhom fam paradise no mu, na dɛn na wobenya kwan ahu?
10 Enti nokware Kristofo wɔ honhom fam paradise mu nnɛ. Dɛn na ɛwɔ saa paradise yi mu? Nneɛma atitiriw abien. Nea edi kan ne nokware Nyankopɔn, Yehowa, som kronn. Wama yɛanya ɔsom a atosɛm ne nsɛm a wɔakyinkyim no nnim. Wama yɛanya honhom fam aduan. Eyi ma yetumi sua yɛn soro Agya ho ade, yɛ nea ɛsɔ n’ani, na yetumi bɛn no. (Yohane 4:24) Honhom fam paradise ade a ɛto so abien fa nnipa ho. Sɛnea Yesaia ka siei no, “wɔ nna a edi akyiri no mu” no, Yehowa akyerɛkyerɛ n’asomfo asomdwoe akwan. Wayi akodi afi yɛn mu. Ɛmfa ho sɛ yɛtɔ sin no, ɔboa yɛn ma yɛhyɛ ‘nipasu foforo.’ Ɔkyerɛ yɛn mmɔdenbɔ ho anisɔ denam ne honhom kronkron a ɛma yenya su pa a ɔde ma yɛn so. (Efesofo 4:22-24; Galatifo 5:22, 23) Sɛ woyɛ w’ade ma ɛne Onyankopɔn honhom hyia a, na woyɛ honhom fam paradise muni ampa.
11 Yehowa aboaboa nnipa a ɔdɔ wɔn ano aba honhom fam paradise yi mu—wɔn a wɔdɔ no, wɔn a wɔpɛ asomdwoe, na “wɔn honhom mu nneɛma ho hia wɔn.” (Mateo 5:3, NW) Nnipa a wɔte saa na wobenya hokwan ahu nsiesie foforo a ɛyɛ nwonwa koraa—adesamma ne asase nyinaa de no.
‘Hwɛ! Mereyɛ Ade Nyinaa Foforo’
12, 13. (a) Dɛn nti na ɛsɛ sɛ nneɛma a wɔbɛsan asiesie ho nkɔmhyɛ ahorow no nya ne mmamu foforo? (b) Sɛnea wɔkae wɔ Eden no, dɛn ne Yehowa atirimpɔw ma asase, na dɛn nti na eyi ma yenya daakye ho anidaso?
12 Nneɛma a wɔbɛsan asiesie ho nkɔmhyɛ no hwehwɛ pii sen honhom fam nsiesie. Sɛ nhwɛso no, Yesaia kyerɛw bere bi a wɔbɛsa ayarefo, mpakye, anifuraefo, ne asotifo yare na wɔbɛmene owu mpo akosi daa ho asɛm. (Yesaia 25:8; 35:1-7) Bɔhyɛ a ɛtete saa annya ne mmamu ankasa wɔ tete Israel. Na bere a yɛahu saa bɔhyɛ ahorow yi mmamu wɔ honhom fam wɔ yɛn bere yi mu no, yɛwɔ nea yebegyina so agye adi sɛ ebenya mmamu ankasa koraa daakye. Yɛyɛ dɛn hu saa?
13 Wɔ Eden no, Yehowa daa n’atirimpɔw ma asase adi pefee: Ná anka adesamma a wɔwɔ anigye, apɔwmuden, na wɔyɛ abusua biako na wɔbɛtra so. Ná anka ɔbarima ne ɔbea no na wɔbɛhwɛ asase ne ɛso abɔde nyinaa so, na wɔadan okyinnsoromma no nyinaa paradise. (Genesis 1:28) Ná ɛno bɛyɛ soronko koraa wɔ tebea a yɛwom mprempren no ho. Nanso, nya ahotoso sɛ, wontumi mmɔ Yehowa atirimpɔw ngu da. (Yesaia 55:10, 11) Yesu, sɛ́ Mesia Hene a Yehowa apaw no no, ɔno na ɔde wiase nyinaa Paradise no bɛba.—Luka 23:43.
14, 15. (a) Ɔkwan bɛn so na Yehowa bɛyɛ “ade nyinaa foforo”? (b) Asetra bɛyɛ dɛn wɔ Paradise, na nea ɛwɔ he na w’ani gye ho sen biara?
14 Yɛ sɛnea wɔadan asase nyinaa Paradise ho mfonini wɔ w’adwenem na hwɛ! Yehowa kaa saa bere no ho asɛm sɛ: ‘Hwɛ! Mereyɛ ade nyinaa foforo.’ (Adiyisɛm 21:5) Susuw nea ɛno bɛkyerɛ no ho hwɛ. Sɛ Yehowa de ne tumi a ɛsɛe ade no di dwuma sɛe nhyehyɛe dedaw yi wie a, nea ɛbɛba ne “ɔsoro foforo ne asase foforo.” Eyi kyerɛ sɛ nniso foforo befi soro adi asase foforo so abusua a wɔn a wɔdɔ Yehowa na wɔyɛ n’apɛde na wɔwom no so. (2 Petro 3:13) Wɔbɛma Satan ne n’adaemone agyae adwuma yɛ. (Adiyisɛm 20:3) Bere a edi kan wɔ mfirihyia mpempem pii mu no, adesamma benya ahofadi afi wɔn nkɛntɛnso bɔne a ɔporɔw ne nitan ahyɛ no ma no ho. Akyinnye biara nni ho sɛ yebenya abotɔyam kɛse.
15 Afei de, yebetumi ahwɛ okyinnsoromma fɛfɛ yi so sɛnea na anka ɛsɛ sɛ yɛyɛ fi mfiase no. Asase no ankasa tumi siesie ne ho. Sɛ woyi nneɛma a ɛde efĩ ba no fi hɔ a, atare ne nsubɔnten ankasa betumi asiesie wɔn ho; sɛ akodi gyae a, nsase a akodi asɛe so no betumi asiesie ne ho. Hwɛ anigye a ɛbɛyɛ sɛ yɛbɛyɛ yɛn ade ma ɛne asase no tebea ahyia, na yɛaboa ma ayɛ sɛ turo, wiase nyinaa Eden a nneɛma a enni ano wɔ so! Sɛ́ anka yɛbɛtɔre mmoa ne afifide ase sɛnea ɛnsɛ no, nnipa ne asase so abɔde nyinaa bɛtra ase asomdwoe mu. Mmofra mpo rensuro mmoa a wɔn ho yɛ hu no.—Yesaia 9:6, 7; 11:1-9.
16. Wɔ Paradise no, nsiesie bɛn na ɛbɛka ɔnokwafo biara?
16 Wobesiesie yɛn ankasa nso. Harmagedon akyi no, wɔn a wobenya wɔn ti adidi mu a wɔwɔ wiase nyinaa no benya ayaresa anwonwakwan so. Sɛnea Yesu yɛe bere a na ɔwɔ asase so no, ɔde tumi a Onyankopɔn de ama no no bebue anifuraefo ani, ama asotifo ate asɛm, na wama mpakye ne wɔn a wɔabubu anya ahoɔden. (Mateo 15:30) Wɔn a wɔn mfe akɔ anim no ani begye sɛ wɔasan anya ahoɔden ne akwahosan sɛ mmerante ne mmabaa. (Hiob 33:25) Honam a atwintwam befi hɔ, anan a akoakoa bɛteɛteɛ, na ntini a ayɛ mmerɛw no benya ahoɔden foforo. Adesamma anokwafo nyinaa behu sɛ nneɛma a bɔne ne sintɔ de bae no de nkakrankakra refi hɔ. Hwɛ sɛnea yɛbɛda Yehowa Nyankopɔn ase wɔ ne tumi a wɔde siesie ade ma ɛyɛ nwonwa no ho! Afei ma yɛmfa yɛn adwene nsi nsiesie bere yi mu nneɛma a ɛyɛ anigye no mu biako titiriw so.
Awufo a Wɔbɛsan De Wɔn Aba Nkwa Mu
17, 18. (a) Dɛn nti na Yesu kaa Sadukifo no anim? (b) Tebea horow bɛn na ɛmaa Elia srɛɛ Yehowa sɛ onnyan owufo bi?
17 Wɔ afeha a edi kan Y.B. mu no, na nyamesom akannifo bi a wɔfrɛ wɔn Sadukifo nnye owusɔre nni. Yesu de nsɛm yi kaa wɔn anim sɛ: “Mofom so, na munnim kyerɛw nsɛm ne Nyankopɔn ahoɔden.” (Mateo 22:29) Yiw, Kyerɛwnsɛm no da no adi sɛ Yehowa wɔ tumi a ɔde bɛyɛ saa. Ɔkwan bɛn so?
18 Yɛ nea esii Elia bere so no ho mfonini wɔ w’adwenem hwɛ. Ná ɔbea kunafo bi ba a odi no ba koro a wayɛ mmerɛw da ne nsa so. Ná abarimaa no awu. Ɛbɛyɛ sɛ na odiyifo Elia a na ɔbea kunafo no asom no hɔho nna kakra no ho adwiriw no. Odii kan boae ma ɔkɔm ankum abofra yi. Ebetumi aba sɛ na Elia ani abegye abarimaa yi ho. Ná ɛna no koma abubu. Ná abarimaa yi ne ade biako pɛ a na ɔhwɛ de kae ne kunu a wawu no. Ebetumi aba sɛ na ɔhwɛ kwan sɛ ne ba no na ɔbɛhwɛ no bere a wabɔ aberewa no. Bere a na ɔbea kunafo no adwene atu afra no, osusuwii sɛ ebia bɔne bi a na wayɛ dedaw so asotwe na aba ne so no. Ná Elia ntumi nnyina awerɛhosɛm yi ano. Ogyee efunu no fii ɛna no kokom brɛoo de kɔɔ n’abansoro dan mu, na ɔsrɛɛ Yehowa Nyankopɔn sɛ ɔmma abofra no kra, anaa ne nkwa nsan mmra ne mu.—1 Ahene 17:8-21.
19, 20. (a) Ɔkwan bɛn so na Abraham daa no adi sɛ na ɔwɔ Yehowa tumi a wɔde siesie ade no mu gyidi, na dɛn na ogyinaa so nyaa gyidi a ɛte saa no? (b) Ɔkwan bɛn so na Yehowa tuaa Elia ka wɔ ne gyidi ho?
19 Ɛnyɛ Elia ne obi a odi kan a onyaa owusɔre mu gyidi. Mfehaha pii a na atwam mu no, Abraham gye dii sɛ Yehowa wɔ tumi a wɔde siesie ade saa—na na ɔwɔ nnyinaso pa. Bere a na Abraham adi mfirihyia 100, na Sara adi mfirihyia 90 no, Yehowa siesiee wɔn awo tumi a na awu no ma Sara tumi woo ɔbabarima ma ɛyɛɛ nwonwa. (Genesis 17:17; 21:2, 3) Akyiri yi, bere a abarimaa no wiee nyin no, Yehowa kae sɛ Abraham mfa ne ba no mmɔ afɔre. Abraham daa gyidi adi, susuwii sɛ Yehowa betumi anyan Isak a ɔdɔ no no aba nkwa mu bio. (Hebrifo 11:17-19) Gyidi a emu yɛ den saa no betumi ama yɛate nea enti a ansa na Abraham reforo akɔ bepɔw no so, de ne ba no akɔbɔ afɔre no, ɔmaa ne nkoa no awerɛhyem sɛ ɔne Isak bɛsan aba wɔn nkyɛn no ase.—Genesis 22:5.
“Hwɛ, wo ba no te ase”!
20 Yehowa gyee Isak nkwa, enti owusɔre biara ho anhia saa bere no. Nanso, wɔ Elia asɛm no mu no, na ɔbea kunafo no ba no awu dedaw—nanso na ɛnkyɛe pii. Yehowa tuaa odiyifo no gyidi so ka denam abofra no a onyanee no no so! Afei Elia kaa asɛm a werɛ remfi da yi de abarimaa no maa ne maame sɛ: “Hwɛ, wo ba no anya nkwa”!—1 Ahene 17:22-24.
21, 22. (a) Owusɔre ahorow a wɔyɛɛ ho kyerɛwtohɔ wɔ Kyerɛwnsɛm mu no atirimpɔw ne dɛn? (b) Wɔ Paradise no, owusɔre no mu bɛtrɛw akodu he, na hena na obedi ho dwuma?
21 Enti nea edi kan koraa wɔ Bible kyerɛwtohɔ mu no, yehu sɛ Yehowa de ne tumi dii dwuma de onipa san baa nkwa mu. Akyiri yi, Yehowa maa Elisa, Yesu, Paulo, ne Petro nso tumi ma wonyan awufo baa nkwa mu. Ɛwom, wɔn a wonyan wɔn no san wuwui. Nanso, Bible kyerɛwtohɔ a ɛte saa no ma yenya nneɛma a ɛbɛba daakye mu anidaso a ɛyɛ anigye.
22 Wɔ Paradise no, Yesu bɛyɛ n’adwuma a ɛne “sɔre ne nkwa” no. (Yohane 11:25) Obenyan nnipa ɔpepem pii a yennim ano, na wama wɔanya hokwan atra ase daa wɔ Paradise wɔ asase so. (Yohane 5:28, 29) Susuw nkabom a ɛbɛba, bere a nnamfo ne abusuafo a wɔdodɔ wɔn ho, a owu tetew wɔn ntam bere tenteenten no bɛyɛ wɔn ho wɔn ho atuu, na wɔn ani agye wɔn ho wɔn ho kɛse no ho hwɛ! Adesamma nyinaa beyi Yehowa ayɛ wɔ tumi a wɔde siesie ade no ho.
23. Na dɛn ne Yehowa tumi a wada no adi a ɛsen biara no, na ɔkwan bɛn so na eyi ma daakye mu anidaso a yɛwɔ no mu yɛ den?
23 Yehowa ayɛ nhyehyɛe a ɛwɔ nnyinaso pa a ɛbɛma anidaso a ɛte saa no abam. Wɔ ne tumi a wada no adi a ɛsen biara mu no, onyanee ne Ba, Yesu, sɛ honhom abɔde a ɔwɔ tumi, na Yehowa nkutoo na ɔkyɛn Yesu. Yesu a wɔanyan no no yii ne ho adi kyerɛɛ adansefo ɔhaha pii. (1 Korintofo 15:5, 6) Ɛsɛ sɛ adanse a ɛte saa dɔɔso ma akyinnyegyefo mpo. Yehowa wɔ tumi a obetumi de anyan awufo aba nkwa mu bio.
24. Dɛn nti na yebetumi anya ahotoso sɛ Yehowa benyan awufo, na anidaso bɛn na yɛn mu biara betumi anya ho anigye?
24 Ɛnyɛ sɛ Yehowa wɔ tumi a ɔde benyan awufo nko na mmom ɔwɔ ɔpɛ a ɔde bɛyɛ saa nso. Honhom kaa ɔbarima nokwafo Hiob ma ɔkae sɛ Yehowa ani gyina sɛ ɔde no bɛba nkwa mu bio ankasa. (Hiob 14:15) So ɛntwe wo mmɛn yɛn Nyankopɔn a n’ani gye sɛ ɔde ne tumi a wɔde siesie ade no bedi dwuma wɔ ɔdɔ kwan a ɛte saa so no? Nanso, kae sɛ, owusɔre yi yɛ nsiesie kɛse a Yehowa rebɛyɛ no mu biako pɛ. Bere a wokɔ so bɛn no pɛɛ no, kura anidaso a ɛsom bo no mu bere nyinaa sɛ wubetumi akɔ hɔ bi akohu sɛ Yehowa ‘reyɛ ade nyinaa foforo.’—Adiyisɛm 21:5.
^ nky. 3 ‘Nneɛma nyinaa ananmu a wɔbɛhyɛ’ no fii ase bere a wɔde Mesia Ahenni no sii hɔ na wɔde Ɔhene Dawid nokwafo dedifo sii ahengua so no. Na Yehowa ahyɛ Dawid bɔ sɛ ne dedifo na obedi ade daa. (Dwom 89:35-37) Nanso, bere a Babilon sɛee Yerusalem wɔ afe 607 A.Y.B. akyi no, Dawid aseni biara antra Onyankopɔn ahengua no so. Yesu a wɔwoo no asase so sɛ Dawid dedifo no bɛyɛɛ Ɔhene a wɔhyɛɛ ne ho bɔ fii tete, bere a wɔde no sii ahengua so wɔ soro no.
^ nky. 6 Sɛ nhwɛso no, Mose, Yesaia, Yeremia, Hesekiel, Hosea, Yoel, Amos, Obadia, Mika, ne Sefania nyinaa kaa asɛmti yi ho asɛm.
2 Ahene 5:1-15 Esiane sɛ ɔbarima bi a ɔtraa ase wɔ Bible mmere mu nyaa ahobrɛase nti, ɔkwan bɛn so na onyaa Yehowa tumi a wɔde siesie ade no so mfaso?
Hiob 14:​12-​15 Ahotoso bɛn na na Hiob wɔ, na nkyekyɛm ahorow yi betumi aka yɛn daakye anidaso so dɛn?
Dwom 126:1-6 Kristofo a wɔwɔ hɔ nnɛ betumi ate nka dɛn wɔ nokware som a wɔasan de asi hɔ ne emu kyɛfa a wonya no ho?
Romafo 4:16-25 Dɛn nti na ɛho hia sɛ yenya Yehowa tumi a wɔde siesie ade no mu gyidi?